रुस-युक्रेन युद्ध- अहिलेसम्म कुन देश रुस, कुन युक्रेनको पक्षमा ? — Sanchar Kendra
रुस-युक्रेन युद्ध- अहिलेसम्म कुन देश रुस, कुन युक्रेनको पक्षमा ?
काठमाडौँ । रुस र युक्रेनबीचको संकट गहिरिँदै भएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा ‘सैन्य अपरेसन’को घोषणा गरेपछि अहिले विश्वको ध्यान युक्रेनतिर छ।
रुस र युक्रेनको विवादबारे विश्वका देशहरुपनि विभाजित बनेका छन्। राष्ट्रपति पुटिनले रुसी युक्रेनी मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने राष्ट्रले गम्भीर परिणाम भोग्ने चेतावनी दिइसकेका छन् ।
अहिले विभिन्न राष्ट्रहरुले आफ्नो पक्षअनुसार वक्तव्य जारी गरिरहेका छन्। नेपालले पनि रुसी आक्रमणको निन्दा गरेको छ र युक्रेनी सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न माग गरेको छ।
युक्रेनका राष्ट्रपतिले रुसी हमलाबाट आफ्नो देश जोगाउन सैन्य सहायता गर्न विश्वसमुदायलाई अपील गरेका छन्।
हालसम्म युक्रेनको पक्षमा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटली खुलेरै उभिएका छन्। भने चीन, पाकिस्तान, बेलारुस, अजरबैजान, क्रोयसिया रुसको पक्षमा देखिएका छन्।
यता युक्रेनको रक्षा मन्त्रालयले रुसी सेनाहरु राजधानी किभसम्मै आइपुगेको जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयले ट्विटरमार्फत् रुसी सेनाहरु राजधानी किभमै घुसेर आक्रमण गर्न थालेको जानकारी दिएको हो।